Xisaabta Abaalmarinta Xuduudaha | Martech Zone
Xuduudaha Abaalmarinta Xisaabta
Khamiista, Noofembar 30, 2006 Khamiista, Noofembar 30, 2006 Douglas Karr
Waxaan haystay kaarka Abaalmarinta Xuduudaha in muddo ah oo hadda waxaan helay emayl ah inaan haysto lacag fara badan oo aan isticmaali karo. Waxaan ku helay khadka tooska ah waxaanan iska diiwaangeliyey degelkooda. Waqtigaas, waxay doonayeen inay igu mahadceliyaan diiwaangelinta waxayna igu abaal mariyeen seddex ka mid ah xulashooyinka:
20% hal shey markaan ka bixinayo $ 20 ama ka badan
12oz cabitaan kulul
$ 10 markaan kubixinayo $ 50 ama kabadan
Ma jiraa qof kale oo u arkaa wax lagu qoslo in # 1 iyo # 3 ay isku mid yihiin? Haddii aan bixiyo $ 50, miyaanay dhiirrigelintu ka badnaan 20%?
Malaha waa aniga uun. Waan ku qanacsanahay, in kastoo! Oo… Aad baan u jeclahay Xudduudda!
Mar 6, 2007 at 10: 48 PM
20% laga dhimay $ 100 = $ 20 laga dhimay
$ 10 $ 100 $ 10 $ waa dhimis
Isku mid maahan
Aug 9, 2007 at 2: 07 AM
Taasi waa sababta cinwaanku u yahay 'xuduudaha ayaa abaalmarinaya xisaabta', taas oo ah, weligeed wax faa'iido ah ma leh qaadashada $ 10 ee $ 50 ama ka badan kuub.
Jan 4, 2011 saacadu markay ahayd 2:11 PM
Farqiga u dhexeeya 1 iyo 3 ayaa ah in # 1 kaliya lagu dabaqi karo hal shay. # 3 waxaa loogu talagalay walxaha aan xadidnayn.